ဝီကီမီဒီယာအခန်းကြီးများ - Meta
This page isatranslated version of the page Wikimedia chapters and the translation is 29% complete.
"ဒေသဆိုင်ရာအခန်း/အခန်းများ" အပြန်အလှန်လမ်းညွှန်ချက်များ။ အခြားအသုံးအဆောင်များကိုကြည့်ရန် အခန်းများ... မသဲမကွဲဖြစ်နေသောစာမျက်နှာ။
ဝီကီမီဒီယာ အခန်းများမှာ ဝီကီမီဒီယာ စီမံကိန်းများကို ထောက်ပံ့ရန်နှင့် မြှင့်တင်ပေးရန် တည်ထောင်ထားသော လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။(အဖြစ်အများစုမှာ နိုင်ငံတစ်ခုတွင်) ဝီကီမီဒီယာ စီမံကိန်းများကို ထောက်ပံ့၍ မြှင့်တင်ပေးရန် တည်ထောင်ထားသော လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။ ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း သည် " အခမဲ့လိုင်စင် တစ်ခုသို့မဟုတ် အများပြည်သူပိုင်နယ်ပယ်တွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ စုဆောင်းရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန်၊နှင့် ၎င်းကိုထိရောက်စွာနှင့် ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေရန် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လူများကို စွမ်းအားပေးရန်နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ရန်" ရည်ရွယ်သည် ။ လက်ရှိအချိန်တွင် 39 အခန်းများသည် အနည်းဆုံး လူနေမှုနယ်ပယ်တိုင်း တိုက်ကြီးတိုင်းတွင် အနည်းဆုံး တစ်ခုရှိသည်။
ဤစာမျက်နှာတွင် လက်ရှိစာရင်းများနှင့် စီစဉ်ထားသည့်အခန်းများကို ဖော်ပြထားသည်။ အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက အဆင့်ဆင့် အခန်းဖန်တီးရေး လမ်းညွှန် နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ လှုပ်ရှားမှု အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ကို ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကအဖွဲ့အစည်းများ ဖန်တီးရန်နှင့် ထောက်ပံ့ပေးရန် အကြံပေးပြီး ကူညီပေးသည်။
ပေါ်တဲလ် အခန်းကြီးများ အခန်းတွင် ဆက်နွှယ်နေသော မေတာစာမျက်နှာများ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို ရှာဖွေပါ
တည်ရှိနေပြီးသောအခန်းများ နှစ်ခုလုံးတည်ထောင်ပြီးသည်(အပြာရင့်ရောင်)နှင့် အတည်ပြုပြီး(စိမ်းပြာရင့်ရောင်)၊ စီစဉ်ထားသော အခန်းကြီး(အစိမ်းရောင်)နှင့် ဆွေးနွေးမှုအတွက်အခန်းကြီး(အပြာနုရောင်) ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉အတိုင်းဖြစ်သည်။
၃ ဆွေးနွေးမှုအဆင့်တွင်ရှိ​သော အခန်းကြီးများ
၄ ဆွေးနွေးမှု အဆင့်တွင်ရှိသော ယခင်အခန်းများ
၅.၅ In Oceania
၆ Composition of chapters
၆.၁ [AM] Wikimedia Armenia (Armenia)
၆.၂ [AR] Wikimedia Argentina (Argentina)
၆.၃ [AT] Wikimedia Österreich (Austria)
၆.၄ [AU] Wikimedia Australia (Australia)
၆.၅ [BD] Wikimedia Bangladesh (Bangladesh)
၆.၆ [BE] Wikimedia Belgium (Belgium)
၆.၇ [CA] Wikimedia Canada (Canada)
၆.၈ [CH] Wikimedia CH (Switzerland)
၆.၉ [CL] Wikimedia Chile (Chile)
၆.၁၀ [CO] Wikimedia Colombia (Colombia)
၆.၁၁ [CZ] Wikimedia Česká republika (Czechia)
၆.၁၂ [DE] Wikimedia Deutschland (Germany)
၆.၁၃ [DK] Wikimedia Danmark (Denmark)
၆.၁၄ [EE] Wikimedia Eesti (Estonia)
၆.၁၅ [ES] Wikimedia España (Spain)
၆.၁၆ [FI] Wikimedia Suomi (Finland)
၆.၁၇ [FR] Wikimédia France (France)
၆.၁၈ [GB] Wikimedia UK (United Kingdom)
၆.၁၉ [HU] Wikimédia Magyarország (Hungary)
၆.၂၀ [ID] Wikimedia Indonesia (Indonesia)
၆.၂၁ [IL] Wikimedia Israel (Israel)
၆.၂၂ [IN] Wikimedia India (India (derecognized))
၆.၂၃ [IT] Wikimedia Italia (Italy)
၆.၂၄ [MX] Wikimedia México (Mexico)
၆.၂၅ [NL] Wikimedia Nederland (Netherlands)
၆.၂၆ [NO] Wikimedia Norge (Norway)
၆.၂၇ [PL] Wikimedia Polska (Poland)
၆.၂၈ [PT] Wikimedia Portugal (Portugal)
၆.၂၉ [RS] Викимедија Србије (Serbia)
၆.၃၀ [RU] Викимедиа РУ (Russia)
၆.၃၁ [SE] Wikimedia Sverige (Sweden)
၆.၃၂ [TW] Wikimedia Taiwan (Taiwan)
၆.၃၃ [UA] Wikimedia Ukraine (Вікімедіа Україна) (Ukraine)
၆.၃၄ [US-DC] Wikimedia District of Columbia (United States)
၆.၃၅ [US-NYC] Wikimedia New York City (United States)
၆.၃၆ [UY] Wikimedia Uruguay (Uruguay)
၆.၃၇ [VE] Wikimedia Venezuela (Venezuela)
၆.၃၈ [ZA] Wikimedia South Africa (South Africa)
၇ Inter-chapter initiatives
၈ Mailing lists and wikis
၉ Wikimedia chapters related news and announcements
၁၀ See also
ဝီကီမီဒီယာအခန်းများကို 39 လက်ရှိ အသိအမှတ်ပြုထားသော ဝီကီမီဒီယာ အခန်းများ ရှိသည် ။
F: WikimediaArmenia M: info
wikimedia.am yes 2013-12-10 16 2000 AMD (~5 USD)
F: WikimediaArgentina L: Wikimedia-AR M: correo
wikimedia.org.ar yes 2013-09-19 65~ full members ARS 100 (~USD 17)
wikimedia.at yes 2015-10-21 150~ 20 €
wikimedia.org.au yes 2010-01-19 47 AU$10
wikimedia.org yes 2021-07-15 116 20 €
F: Wikimedia CH L: WikimediaCH-l M: info
F: Wikimedia Chile L: Wikimedia-CL M: contacto
wikimediachile.cl yes 2011-07-16 34 CLP 12,000 (USD 17,1)
F: Facebook L: WikimediaCZ-l M: info
wikimedia.cz yes 2012-01-26 60~ regular members, 1 sympathizing member,3honourable members CZK 200 (~USD 10)
F: WMDEeV L: VereinDE-l M: info
wikimedia.fi ? 2010-09-25 21 € 10
wikimedia.fr yes 2012-01-25 250 normal : 12 €
F: WikimediaUK L: WikimediaUK-l M: info
F: WikimediaHU G: huwiki-egyesulet M: board
F: wikimedia.indonesia G: wikimedia-indonesia M: info
U: Biyanto Rebin - Chairman (biyanto.rebin
wikimedia.or.id) yes 2012-01-30 19 (founders)
(2007-03-06) he (legally binding), en W: wikimedia.org.il L: Wikimedia-IL M: mail
wikimedia.org.il yes 2012-01-11 35~ 20 ILS(~7 USD /4€)
T: @WikimediaItalia M: info
wikimedia.it yes 2017-12-31 410~ 25 € (members removed afterayear if they don't renew the subscription)
F: wikimediakr L: Wikimedia-KR M: office
T: @wmnl L: WikimediaNL-l M: info
wikimedia.nl (general inquiries)
wikimedia.pl n/a 2010-03-13 130 list 1 PLN (0.2 USD) min. Members may choose to pay more: average is ~ 20 PLN /5USD
L: Serbia-Internal-l (internal) M: info-rs
L: WikimediaRU-l (internal) M: info
F: Wikimedia Sverige L: WikimediaSE-l M: info
wikimedia.se (press) yes 2021-04-26 405 SEK 100 / EUR 10 / USD 15
L: Wikimedia-TW M: info
wikimedia.org yes 2020-06-30 66 list 100 UAH (3.3 €) min
wikimedia.org.ve yes 2016-01-14 15~ USD 25
ဝီကီမီဒီယာ အခန်းကြီးများကို ဖော်ပြထားသော ကာလများအတွင်း အောက်ပါအတိုင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
KE Wikimedia Kenya (ဤနေရာတွင် "၂၀၁၂-၀၂-၀၈" )ကို
ဘယ်သောအခါမျှ ထည့်သွင်းမပေးပါ 2013 ယာယီအသိအမှတ်ပြုမှု သက်တမ်းကုန်ဆုံး
(2008-03-04) 2017-02-01 ကြာရှည်စွာလိုက်နာမှုမရှိခြင်းအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရသည် 
ဆွေးနွေးမှု အဆင့်တွင်ရှိသော ယခင်အခန်းများ
In ၂၀၂၁, the Board of Directors is:
↑ ဘုတ်အဖွဲ့ ဖြေရှင်းချက်
↑ Announcement from the Affiliations Committee ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၇
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_chapters/my&oldid=21383084"
Last edited on 24 April 2021, at 16:28
This page was last edited on 24 April 2021, at 16:28.